Qalabka AMP ee leh Google Analytics - SO
AMP plugin oo leh Google Analytics
Geli <amp-analytics> tag
Soo-saareyaasha bogagga moobilka ee la dedejiyay ayaa si toos ah u ogaanaya in koodka raadraaca Google Analytics lagu rakibay goobtaada oo uu akhriyo aqoonsiga raadraaca Google Analytics ee u dhigma, i.e. lambarka UA .
Mashiinka dhaliyaha 'AMPHflix' wuxuu kaloo aqoonsan yahay isticmaalka suurtagalka ah ee dhowr nambar UA , sida loo isticmaalo, tusaale ahaan, 'Raadinta Koontada Badan' . Matooriyaha khadka tooska ah ee AMP wuxuu si otomaatig ah ugu beddelaa dhammaan nambarada Google Analytics UA lambar 'falanqaynta' iyo sidoo kale wuxuu sidoo kale hawlgeliyaa raadraacii hore ee Google Analytics ee ku jiray bogga AMP!
Noocan ah isdhexgalka Google Analytics, dhammaan xogta dabagalka falanqaynta ee bogga AMP ayaa ka muuqda xisaabtaada (!) Google Analytics , si aad u sii wadato inaad hesho dhammaan xogta raadraaca AMP ee lagu ururiyo meesha caadiga ah!
Soo -saaraha internetka ee AMP wuxuu taageeraa dhammaan noocyada soo socda ee Google Analytics:
Google Analytics 360 ° (falanqaynta.js)
Falanqaynta Universal (analytics.js)
Falanqaynta Urchin (urchin.js)
Google Analytics IP qarsoodiga 'anonymizeip'
Dalalka qaarkood (tusaale ahaan Jarmalka) shuruud kale waa in la buuxiyaa si loo awoodo in loo isticmaalo Google Analytics iyadoo la raacayo xeerarka ilaalinta xogta: Adeegsiga qarsoodinimada IP. Sababtan awgeed, Soo -saareyaasha Bogagga Mobilada ee Dardar -gelinta ah ayaa si otomaatig ah u taageera hawsha Google Analytics 'anonymizeip' wuxuuna dejiyaa octet -ka ugu dambeeya ee cinwaanka IPv4 ama 80 -ka ugu dambeeya ee cinwaanka IPv6 eber ka hor badbaadinta xogta isticmaalaha. Tani waxay ka dhigan tahay in cinwaanka IP -ga oo dhammaystiran aan marna loo qorin darawalka adag ee server -ka Google Analytics!
Google Analytics qarsoodi IP-ga si firfircoon uma hirgeliyo matoorka Boggaga Mobilada ee la Dardargeliyey, laakiin waa dejinta caadiga ah ee sumadda 'amp-analytics' ee ka timid dokumentiga AMPHTML ee rasmiga ah .
Xogta ku taal sumadda 'amp-analytics' ayaa guud ahaan si qarsoodi ah loogu gudbiyaa!
Macluumaadka ilaalinta xogta Google Analytics ee bogagga AMP
Si loogu daro si toos ah raadinta Google Analytics si loogu adeegsado u hoggaansanaanta xeerarka ilaalinta xogta, waxay u baahan tahay qoraal cad oo ku jira bayaan ilaalinta xogta ee mareegahaaga!
Boggaga AMP ee la soo saaray ee laga heli karo amp-cloud.de, dhammaadka tixraac kasta oo bogga AMP waxaa loo sameeyaa bayaannada ilaalinta xogta ee amp-cloud.de, oo ay ku jiraan macluumaadka ilaalinta xogta lagama maarmaanka u ah raadraaca Google Analytics.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad isticmaasho mid ka mid ah amp-cloud plugins AMP, waa inaad ku dartaa qoraal ku saabsan raadinta Google Analytics siyaasadda asturnaanta ee mareegahaaga!
amp-cloud.de ma qabato wax mas'uuliyad ah oo ku saabsan xadgudub kasta. Waa inaad hubisaa oo hubisaa naftaada haddii koontadaada Google Analytics iyo bogagga AMP loo sameeyay hab sharci ahaan sugan! (Eray -fure: Qandaraaska Falanqaynta Google ee dalbashada ka shaqaynta xogta sida ku cad § 11 BDSG ).